Aqoonta - Qingdao JBD Makiinado Co., Ltd
AQOONTA ALL billaabay KA SHAQADA
caag laga beddelay in "saddex ah" isbedel
The macdanta imanba sida budada calcium carbonate lagu darayaa cusbi salka, ciyaaray saddex hawlood oo waaweyn oo kordhay, waxqabadka fiicnaaday iyo shaqeynayaan kordhay, loo yaqaan buux caag ah. In the case of qaab si ay ula kulmaan, iyadoo la isticmaalayo budada ka badan, iyo doorka weyn hoos qiimaha. Yaree xaddiga ku salaysan saliid-alaabta ceeriin ee cusbi dardaro isticmaalo, darsaday weyn bulshada. Sida dhaqaalaha Shiinaha ayaa galay a "cusub oo caadi ah" iyo isbedelka hab ee koboca dhaqaalaha, ka badan dalabaadka cusub ee caagga ah modified. In General, iftiinka, functional iyo bey'ada waa jihada mustaqbalka ee warshadaha.
Maxaa yeelay, cufnaanta imanba budada macdanta ka badan cufnaanta ee cusbi polymer ah (2-3 jeer), iyadoo wax caag ah cufnaanta buuxsamay sidoo kale waxay kordhisaa si weyn sababtoo ah budada ku daray. miisaanka Unit mid ah waxyaabaha la, ah ee cusbi iyo budada ratio daahir yahay yaryar ee size, tirada, dhererka, goobta, taas oo qiimaha loo xisaabiyo, iyo khasaaraha ay sabab u tahay hoos u dhac ah oo ka mid ah xubno inta badan culus faa'iidooyinka isticmaalaya a buuxiyo budada raqiis ah. Intaa waxaa dheer, miisaanka oo kordha sidoo kale kordhin kharashka gaadiidka, shaqada iyo arrimaha kale. Si kastaba ha ahaatee, waxbarasho ka heleen, iyada oo alaabta ceeriin iyo technology iyo hal-abuurka qalabka, "dhibaatada miisaanka" lagu xallin karin ilaa xad.
Geedi socodka iskala
Polypropylene (PP) guri, ka dib ku dhawaad ​​lix jeer jeer siligga ah, oo qayb ka ah budada calcium carbonate kala firdhiyey ee u taagoo PP sameeyay iyada oo loo marayo kala ah godadka si miisaan la mid ah waxyaabaha, oo dhererkeedu wuxuu silig guri ma si weyn u bedesho, sidaas darteed waxyaabaha siligga sare dhibaatooyinka miisaan ma aha wax iska cad.
Afuufa wax taaj oo kale ah oo bac waqtiga processing by stretch bidirectional, ratio kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay waxyaabo kala duwan, laakiin guud ahaan laba ama saddex jeer. Oo ku dar tiro isku mid ah ee isku duro doorsoon wax caag ah budada, cufnaanta filimka Suurka uga yar.
Natiijooyinka baaritaanka sidoo kale muujisay in, xataa wax taaj oo kale duro, haddii aad u yaqaaniin kara cadaadiska duro oo haysta waqti cadaadiska, si siman daawooyinka iyo qalabka processing, isbeddel ah ee mugga wax ilaa 3 ~ 4% ka mid ah waxyaabaha ay wax taaj oo kale duray.
daro caag bax suuq-bedelka
daro caag ah in waxyaabaha caag xisaabiyo tiro ka yar 8%, laakiin on sifooyinka bacyaal processing iyo waxyaabaha loo hagaajiyo iyo kor loogu qaado doorka waxaa door muhiim ah. Marka dhisme ee Beeyada polymer, xulashada iyo codsiga ah lagu daro waa in la go'aamiyo guusha ama guuldarada muhiimka ah sheyga.
Sida taageero muhiim ah balaastigga ah ka baaraandegidda warshadaha, lagu daro bacyaal iyo heerka sare, heerka tayada wax soo saarka, qiimaha, si toos ah saameyn iyo go'aan ka kala duwan ee geedi socodka wax taaj oo kale ah iyo qalab in ay soo saaraan waxyaabaha caag ah oo leh tayo iyo qiimo. Waxaa la odhan karaa in bacyaal ka baaraandegidda warshadaha iyo caag ah alaabta si kor loogu qaado heerarka daro caag ah si ay kor sida horay!
Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha ee kaabayaal ah uu sameeyay horumar badan iyo guulaha. wax soo saarka Plasticizer ee baaxadda, iyo technology, iyo waxyaabaha kala duwan oo tayo leh oo alaabta iyo heerka isku-filnaanshaha gudaha si joogto ah loo hagaajiyo, class zinc calcium wakiilka kulul deggan awoodda, iyo noocyo iyo mugga codsiga maratay koritaanka, cusbo hogaanka saamiga wakiilka deggan dheeraad ah hoos, halogeen lahayn, iyo ballaarinta qiiq wakiilka nooca olol retardant hoose iyo olol Silicon wakiilka retardant organic ee wax soo saarka horumarinta sameeyey waxtarka; qaab-dhismeedka cusub kelli, iyo nooca quduuska ah antioxidant, iyo noocyo wakiilka deggan iftiin si joogto ah soo saaray. Intaa waxaa dheer, wakiilada afkuu kiimikada, modifiers saameynta iyo saliidaha, wakiilada xigay, wakiilada antistatic, wakiilada nucleating iyo alaabooyinka kale ee kaabayaal ah ayaa gaarey natiijooyin dhiirigelin.
Tan iyo 2015 ee iibka warshadaha ah hoos u yar yihiin, laakiin tan oo margin faa'iido soo hagaagtay, qaar ka mid ah xitaa ka muuqan dhanka ah xaaladda dibad. In the case of warshadaha bacyaal oo dhan ma aha rajo, horumarka wax soo saarka waa ka wanaagsan tahay noocyo kale. horumarka, kuwaas oo lagu daro bacyaal on tayada wax soo saarka iyo wax soo saarka, wax ku ool ah u riixaya iyo kor u qaadida bacyaal isticmaalo iyo wax soo saarka iyo processing ee horumarinta iyo horumarka.
xiriir toos ah la waxyaabaha baakada daawooyinka iyo fursadaha weelka
Sababo la baakooyinka wax, iyo weelka ee halabuurka, iyo daroogada by doorashada ee accessories asalka ah iyo habka wax soo saarka ee kala duwan, waxyaabaha baakada daroogada iyo weelka ee qaar ka mid ah nuqulada group laga yaabaa ahaa doonaa by xiriir daroogada kala diri baxay, oo ama iyo daroogada ka dhacay kasta doorka kale, oo ama waxaa daroogada muddo dheer barareyso daxalka off kiniin oo si toos ah saameyn daroogada ee tayada; iyo, qaar ka mid ah tayada daroogada iyo aadanaha ee saameyn ayaa galmada (in tayada daroogada iyo aadanaha ee imtixaanka guud ee aan waqtiga laga heli karaa dhibaato) ku qarsoon.
mabaadi'da soo xulay iyo shuruudaha
1, shaqeynayaan Baakadaha
Warshadda Pharmaceutical wax soo saarka, kaydinta, gaadiidka, isticmaalka daroogada, inta lagu jiro mudada of daroogada, ciyaaraa ilaalinta tayada daawada, function daryeelka caafimaadka ku haboon.
2, mabda'a xulashada
Waa in lagu saleeyaa sifooyinka of baahida daroogada iyo baakooyinka daroogada qalabka, geedi socodka samaynta iyo wax soo saarka, iftiinka dooro, kulaylka, qabowga, shucaaca gaashaamashada guryaha caqabad aad u fiican, oxygen, uumiga biyaha, iyo arrimo kale oo, ay xasilooni u gaar ah, iyo qalabka baakooyinka daroogada iyo weelasha ama kala iibsiga si ay u midba midka kale.
Dhuxul in olefin dhibaato qabow laakiin ma kulul meesha
2015, Shiinaha ganacsiga dhuxusha olefin daray xawaaraha sii daayo awoodda cad Kobocii, qorshaysan sanadkan waa in uu leeyahay wax soo saarka qalab ka badan 3 milyan oo tan, laakiin, sida dhamaadka October qalab faafinta cusub kaliya Tung WAH Group tamarta Yangtze River kiimikada iyo Pucheng nadiif ah tamarta, iyo sida ay fariin lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in, ayaa la filayaa in sanadkan qeybtii labaad ee wax soo saarka ee 350,000 metrik / sano ee qalabka PP tamarta Thai Inner Mongolia dheer dib loo dhigay doontaa in 2016, waxaana la filayaa in dhamaadka November ee drive ee kabka dhuxul ah weyn, sanadkan eryi karo hadda weli ma sii daayay ogaado fariin. Dhanka kale, Changzhou Fude, Guangzhou kiimikada iyo Qinghai Salt Lake ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay dib u dhac waqti kala duwan. Dhuxul in olefin ma aha gacan qaad ahaayeen gaabis ah, jidka?
Waxaad dhahdaa runta, dalka caatada-saliid ah 1.3 billion oo qof uu leeyahay in ka badan 10 qalabka gasification dhuxusha waa ma aad u badan, laakiin ku xusan, maal badan yihiin ma ahan mid fiican sababtoo ah dhaqaalaha ee gasification dhuxusha. Sidaas faa'iidada ay gaabis iyo wax soo saarka qayb ahaan in la eedeeyo. Waayo, ku dhawaad ​​sanad, qiimaha shidaalku sare waa ka soo dhici, dhacooda ah kaas oo iman kara, muddo dheer si lama filaan ah u hooseeya dhab saliidaha in olefins warbixinta kooban ee xukuma ma technology oo kaliya waa ka qaan, iyo qiimaha waa ka raqiisan. Dhuxul inay faa'iido faa'iido olefin si tartiib tartiib ah la waayay waqti isku mid ah, sida qiimaha suuqa PP, PE sii dhacaysa, wax soo saarka saliida iyo waxyaabaha dhuxusha faafin maalmihii la soo dhaafay ay soo yareyn, warshadaha kiimikada dhuxusha faa'iido binta hooseeyo mar dambe. In PP, tusaale ahaan, hadda waa dhuxusha ganacsatada olefins ka dhuxusha si polypropylene cayriin kharashka wax, kharashka dhaqaale iyo kharashka maamulka ee wadarta ku dhawaad ​​7000 Yuan / ton, la PP farqiga qiimaha suuqa, shirkadaha qaar ka mid ah xitaa lacag lumay, faa'iido , iyo in kiiska, horumarka mustaqbalka ee dhuxusha si ay u olefins lagu tilmaami karaa dahsoon.
Dabcan, marka lagu daro qiimaha hooseeyo oo saliid ah xannibaad ah ee dhuxusha qoyska oo ay ku ariinta ugu wax soo saarka olefin mashruuca arrimaha ugu waaweyn, technology, caasimada, qiimaynta raadka ay deegaanka iyo su'aalo taxane ah, iyo ujeedada caadi wadista ee haadka gaabis ah. Saadaaliyay in haddii qiimaha saliidda caalamiga sii joogo ilaa 50 doolar halkii foosto, ay waajib tahay in dib-u-baaro rajada ee dhuxusha si ay u olefins ayaa la filayaa.
Qiimaha PP sii wadaan in ay hoos u guurto xarunta of cuf "dhacdo" goorma?
PP arrimo taban ugu weyn ee suuqa mustaqbalka dhow:
1 iyo joogsiyada ku daray, eryi dhirta kiimikada cusub ayaa weli ma dhif ah, ma isbedelo waa weyn ee sahayda suuqa.
2, baahida final kor u raacay daal, warshado badan qaata hakin, sii iibsiga on-weydiinta si ay u ilaaliyaan soo-saarka caadiga ah.
3 boqor sawir bixiyaha adeegga, inta badan oo ka mid ah heshiis faa'iido-qaybsiga kordhay, sii yar yahay alaabada ay.
4, "laba foosto" kaydka kiimikada ka dhacaysa, ex-shuqullo lagu gooyn, qiimaha hooseeyo sii wadaan in ay ku dhacay suuqa.
, Maalin walba 5, PP gaaban ee suuqa-xukuma mustaqbalkooda aasaasiga ah la furitaanka hooseeyo, Iscelin of xamaasad ganacsiga kaalinta, suuqa si joogto cadaadis.
6, qiimaha caalamiga ah ee saliidda ee daciif ah, inkastoo ay si taxne kore iyo inta lagu jiro mudada, laakiin ku guuldareystay in ay sii wadaan, laakiin sidoo kale saameyn ku yeelan suuqa kaalinta for PP.
Dawn suuqa polyetylen xasilloon muddo dheer?
From suuqa, arrimaha ugu muhiimsan ee saameynta ku leh suuqa PE waa: asaaska suuqa kheyraad ee baahida iyo, siyaasadaha binta for shirkadaha kiimikada iyo dhaqankan toosan ee mustaqbalka.
kaca suuqa kheyraad ee: qiimaha saliidda caalamiga ah tan iyo sare ee sannadkii hore oo dhan $ 110 hore xadhig. Waqtigan xaadirka ah, ee United States New York qiimaha mustaqbalka saliidda cayriin in sabeyn ku dhawaad ​​$ 40, Brent qiimaha mustaqbalka saliidda cayriin in sabeyn ku dhawaad ​​$ 44 hoos u Supply, baahida daciif ah, agabka iyo saliidda cayriin sare sii wadi doonaa si loo xakameeyo qiimaha, maalinta inventory sare u qaadeen, kubadii qiimaha saliidda waa itaal daranyahay. vinylalkohol Asian, ay sabab u tahay sahayda dhagan iyo baahida hoose, taageerada qiimaha ethylene Waqooyi Bari Asia, si kastaba ha ahaatee, iyada oo isla muddadaas sannadkii la soo dhaafay marka la barbar dhigo, faafidda weli waa weyn.
Fundamentals of baahida iyo, sida dhirta kiimikada dhuxusha ka yar xasiloon, la dhigto muddo gaaban iyo dayactirka shil aad u badan ee November, laakiin wax soo saarka lumay ay sabab u tahay la dhigto iyo dayactir kaliya a boqol oo kun oo tan, si cadaadis sahayda suuqa weli waa weyn . saamaynta suuqa Xiga mashruuca gasification dhuxusha, Shenhua Yu Lin 300,000 oo tan oo awooda inay dib u dhigto ilaa dhamaadka bilaabay December, daboolay 300,000 oo tan oo dhirta dhuxusha bishii March ee sannadka soo socda ayaa la filayaa inuu ku rideen. Production mashruuca gasification dhuxusha, inkastoo ay adag tahay in ku garaacday waqti gaaban ee PetroChina iyo Ururka ONLF ayaa in hogaamiyaha suuqa balaastigga ah, laakiin waxa ay si tartiib ah u wiiqi doonto warshadaha ee ka faa'iidada monoboli, suuqa caqabado. Baahida, ee macnaha guud ee hoos u dhaca dhaqaalaha, warshadaha ee balaastigga ma noqon karo marka laga reebo ah. Amarrada, iyo alaabta ceeriin sano ka badan sanadihii hore this, caag ah manufactures shirkadaha waaweyn iyo kuwa dhexe ee ka shaqeeya 70%, ganacsiga beeraha ka shaqeeya 60% ka -80%, stock warshad dhiirogelin saboolka ah, tiro kooban oo soo iibsiga oo dhan, ay adag tahay in taageero suuqa saamiyada. Ama xaaladda baahida daciif sii wadaan in ay cudurka daacuunka Muuqaalka suuqa.
warshadaha kiimikada, sarkhaansan yihiin saliidda cayriin / mustaqbalkooda hoos jira, taxanaha ah ee gobolka of qiimaha cut of kiimikada, saliid, nabaad taageerada suuqa waqti isku mid ah, waxa kale oo ay muujinaysaa in weli ay jiraan qaar ka mid ah cadaadis on sawir isagoo suuqa saamiyada kor u kacay, taasoo keentay in suuq daalid guud adag. dhamaadka bishan, sicirka saliidda joojin la taageero wanaagsan oo xoog dib suuqa kaalinta dhicidda, laakiin kubadii waarta waa ay adag tahay in la saadaaliyo in qiimaha mustaqbalka ee isbeddellada saliidda cayriin iyo Futures wadi doontaa in ay noqon arrin muhiim ah oo ku saabsan qiimaha kiimikada.
On 2016 horumarinta warshadaha polypropylene
By December, ku dhawaad ​​2015, qiimo hoose oo saliid ceyriin caalamiga ah, hal iyo arrimo taban badan sida dheelitir la'aanta dalabka sahayda iyo hit, polypropylene ee Shiinaha iyo xataa dhac warshadaha bacyaal oo dhan, qiimaha dhacayaa, iyo mustaqbalka leh calaamad su'aal ka buuxsamay. Inkastoo sanadihii ugu dambeeyey, wax soo saarka ee technology Hannaan polypropylene, teknoolajiyada horumarinta waxay sameeyeen horumar la taaban karo, laakiin wax gaar ah oo la qiimo sare ku daray weli u baahan yahay inuu soo dhoofsadaan teknoolajiyada sidoo kale ku tiirsan yihiin laga keeno. Oo ay weheliso qiimaha alaabta qaranka ee Bariga Dhexe, Tuujiya suuqyada our, tartanka ganacsi waa ka awood badan. So. Halkee si ay u bilaabaan si ay u boodboodi a tayo ee Xirfado pp qoyska.
Inkastoo tiro unit polypropylene, laakiin baaxadda wax soo saarka yar yar, awoodda wax soo saarka hal unug waa xadidan tahay, taasoo keentay in soo saarka daalid, isticmaalka tamarta sare. Sidaa darteed, waa in aan wajiga baxay awoodda wax soo saarka dib ugu, xaddido helitaanka nidaamka warshadaha si loo hubiyo in mashruuca cusub ee baaxadda iyo habka ka gaadhay heerka sare ee caalamiga ah, tartan suuqa ee shirkadaha ku Dadaashid tayada wax soo saarka iyo heer caalami.
Second, awoodda horumarinta technology Shiinaha ee, waa in kor loogu qaado awooda hal-abuurnimo madax banaan iyo warshadaynta ee cilmi-baarista iyo horumarinta waxyaabaha u fiican sida ugu dhakhsaha badan, si firfircoon raad dunida ka mid ah farsamooyinka Hannaan polypropylene iyo codsiyada si kor loogu qaado tartan ee technology guriga, yaraynta farqiga dhexeeya ujeedooyin caalamiga ah.
Saddex saameyn acetate waxyaabaha polypropylene waxyaabaha hadda jira iyo qalabka boqolkiiba hooseeyo, sida waxyaabaha-dhamaadka sare. Waanwaanta dhismeedka alaabta, la xoojiyo dadaalka ay ugu horumariyaan waxyaabaha cusub waa mid dhow. mashaariic cusub Future waa in ay diiradda saaraan tayo sare leh, wax soo saarka qiimo-daray sare.
Afarta, network iibka aasaasay, iyada oo channels suuqa, dabacsanaan si ay ula qabsadaan wax soo saarka si ay u daboolaan baahida suuqa, iyo xukunka diyaar u ah baahida suuqa sidoo kale kaa caawin doontaa in shirkadaha looga fogaado khatarta aan loo baahnayn.
PBT dalabka suuqa dun ubucda-miiqeen maxaa yeelay,
dalabka suuqa Tongxiang
In suuqa dharka oo dhan soo gaaray markii jiilaalka yimaado, suuqa Tongxiang waa sheeko kale. Waxaa la fahamsan yahay in Tongxiang ku cored bakayle dayashada dun timaha suuqa sidii dab oo kale ah ee xilliga qaboobaha, dalban jeebka, keeni diiran si uu ku qaboojiyo suuqa. Waqtigan xaadirka ah, sida fur cudbi accessories mashiinka dun ubucda-miiqeen isku qasan, ka alaabta ceeriin in nylon PBT ah, waxaa lagu soo bandhigay in sahayda gaaban. Sida laga soo xigtay tirakoob, Bale suuf ilaa 35% labadii bilood ee la soo dhaafay, bixinta muddo 15 maalmood ah, kharashka qalab siyaada ah xudunta u kacay 38%, muddo bixinta la kordhiyay ilaa 20 maalmood. amarada dun, laakiin waa in la qorsheeyaa. Dhanka kale, suuqa dhawaan si ay u iibsadaan badan biligleynaya xaaladda iftiinka degna miiqeen, halis yar ee suuqa. Tani Flash fiber gaaban wax soo saarka asaasiga ah dun-miiqeen dhogor Flash dayashada bakayle alaabta ceeriin.
Zhangjiagang-soo-saarka Warshadda PBT dun ubucda-miiqeen
Si weyn ee muhiimka ah xirmo saldhig saarka dun Zhangjiagang de magaalada saarka kiisaska, lagu qiyaasay hadda wax soo saarka PBT qalabka dun ubucda xirmo muxaafidka ah ayaa ku dhow 400 oo Taiwan, taas tiro weli sii wadaan in ay Rose, hadda wax soo saarka maxaliga ah ee dheeraad ah ee warshad weyn ee ku urursan yaryar ee processing warshad nooca, saamiga wax soo saarka qayb ka warshad uu leeyahay ayaa qeybtii kor ku xusan, in LUN ammonia core xirmo-soo-saarka Warshadda dun taxaddar badan oo qaraabo, wax soo saarka gargaarka qayb fiican xirmo LUN ammonia warshad core dun ma, laakiin PBT suuqa dun ubucda xirmo ah sii, biir PBT kale oo uu leeyahay tiro sii kordhaysa oo warshado wax soo saarka asaasiga ah dun-miiqeen.
Waa maxay fiber PBT?
PBT waa nooc ka mid ah macdantaa caag cusub, inta badan ku salaysan PTA esterification toos ah la BDO ee wax soo saarka, ka dibna mari reaction uumiga ah, ka dibna by fur dhalaalid iyo macdantaa PBT. 30% ~ 60% muruqa fiber PBT, soo kabashada laastikada badan caag iyo nylon, spandex in ka yar; Waxaa intaa dheer, fiber PBT ayaa rigidity weyn iyo qaabka xasilloonida, bulkiness, iyo duub waa heer sare, iyo dhogor dareemaan, sidaas darteed meelo ka mid ah dhar kale oo uu leeyahay weyn iman kara.
dhismaha caaga arrimo line-soo-saarka, waayo, soo saarta sifooyinka template caag ah
1, iska caabin biyo wanaagsan ee dhismaha caag ah habyaalada line-soo-saarka. Xitaa haddii ay si buuxda u la Hawiyaha ah ee biyaha dhowr maalmood, ama calaamadaha lahayo ay sabab u qoyaan. ma qudhmi doonaa miridhku.
2, iyo cement incompatibility, nqoday, sii daayo si fudud ka dib markii dhismaha ama calaamadaha lahayo ay sabab u tahay Amda of sibidhka.
3, oolnimada sare, line wanaagsan wax soo saarka arrimo dhismaha caag ah oo tayo leh. Iyadoo dhismaha dusha dhismaha waa siman, iyada oo aan wax ka beddelid labaad.
4, habka badbaadiyo, hagaajinaysaa-oolnimada ee dhismaha. Marka template la farsameeyo waqti isku mid ah, Pretreat foomamka, heli qaababka derbiga.
line-soo-saarka bac PE keeno alaabta
Our alaabta PE gudaha line-soo-saarka bac, qaybaha korontada ugu weyn waxaa laga keeno, Heer sare ah ee qalabaynta, xawaaraha-soo-saarka, qaliin fudud, qiimaha ka yar 1/10 ee hordhaca ah ee qalabka la mid ah laga keeno. Production of saxan qori-caag ah oo leh qalabka, PVC iyo budada alwaax, caws engegan oo kale dhirta sida wax cayriin, habka wax taaj oo kale extrusion ka tayada wax soo saarka si ay u buuxiyaan shuruudaha caadiga ah ee badeecada shisheeye la mid ah.
The saxan wax soo saarka dab-caddayn, qoyaan-caddayn, muuqaalada dab-retardant, si ballaaran loo adeegsado dhismaha, decoration iyo dayactirka oo uu leeyahay rajada suuqa ballaaran oo ka iman kara marketing waarta. caag ka samaysan alwaax halkii qoryo, si ay u ilaaliyaan khayraadka kaynta, caag ka samaysan alwaax oo kale caws buu ku beeri kara, si loo yareeyo wasakhaynta deegaanka; looxyada plywood in la baabi'iyo wasakhda cad, qurxiyo deegaanka.
Hannaan: balka (fiber) qalajiyo, ku dar qadar weyn oo ah budada qoriga ah, beddello yaryar, laakiin sidoo kale soo saari kartaa guddiga xumbo PVC, bran bariis badali karaa qoryo.
line-soo-saarka bac PE la si gaar ah loogu toobinta SJSZ92 extruder fur oo mataano ah, DC drive xawaaraha variable, heerkulka qalab gacanta for noocyada laga keeno, ayaa tiro balaadhan oo xawaaraha, ay gacanta ku heerkulka sax sare, fududahay in la shaqeeyaan oo lagu kalsoonaan karo. miiska darran vacuum qaabeynta, mashiinka kala jar, jarida iyo mashiinada riix jir.
Qalabaysan qalab qaboojinta waaweyn si loo hubiyo in natiijada sheet bir sameynta. nooca-Track cagaf la motor marsho sax iyo inverter, qaab macquul ah, jar ka sii weyn, jar, xasiloonida iyo wixii la mid ah. Goynta mashiinka la mudnaan saxnimada lagu kalsoonaan karo oo sax ah, goynta sare ah, ku hardiyi hayayaashii la tarooli riix saari karo iyo daahan caag gaar ah, iyadoo aan waxyeelo qalab, si fudud on si ay u isticmaalaan iyo. unit mashiinka darran nidaamka gacanta programmable loogu talagalay gacanta ku computer ama noocyada guryaha, mashiinka dhamaystiran gacanta ku xasilooni lagu kalsoonaan karo.
Falanqaynta kooban oo ka mid ah diyaarinta qalabkan baakadaha iyo heerarka
bacyaal Shiinaha baakooyinka warshadaha qalabka waxa uu noqday mid ka mid ah warshadaha caadiga ah, 2011 our baakooyinka wax soo saarka warshadaha gaadhay 130 milyan oo Yuan, sii kordhaya 20% sanadkii, 2014 ama in ay gaaraan 2 trillion yuan, 14-kii kaalinta 42 warshadaha waaweyn ee dalka, ayaa noqday labaad ee ugu weyn United States xirmo dunida ee labaad ee ugu weyn. Shirkadaha baakadaha cuntada xisaabiyenimo ah oo ku saabsan 1/3, 2013 sano oo dhan shirkadaha warshadaha baakooyinka, bacyaal Shiinaha ayaa ka baaraandegidda shirkadaha kor ku soo saarka size loo qoondeeyey gaaray 61,886 million tons, oo lagu daray soo saarka shirkadaha yar yar iyo micro in ka badan 80 milyan oo tan 2014, ka isticmaalka alaabta baakadaha caaga ah ayaa ka sii badnayeen 100 million tons, kuwaas oo, in ka badan 20 milyan oo tan oo caag baakadaha cuntada, si ay ammaanka ayaa sidoo kale noqon kartaa mawduuc kulul.
In qalab iyo caag balaastig ah waxyaabaha ku jira, iyo cusbi caag ah iyo processing alaabta caag ah oo ku saabsan of noocyo daro kala duwan ayaa badan, si ay u gaareen dumin kara ama waxyaabaha aa sifooyinka caag ah, ee processing la xirrira in waajib ah oo aan u baahnayn ku daray isdul saaran in ay soo hagaagtay waxqabadka processing ay ama sifooyinka, iyo daro processing, kuwaas oo ay laftiisa of sifooyinka dhismeedka in la isticmaalayo habka ee ama wax soo saarka ee uu leeyahay ma xasilloonida, si ay keentay in gaaska waxyeello kacsan iyo socdaalka, dadka nolosha keentaa leeyahay waa arrimo taban.
Gaar ahaan, annagu ma nidaaminaya ganacsiga ay si joogto ah u eryan macaashka. Isticmaalka culus of alaabta ceeriin liita in ay wax soo saarka, taasoo keentay in jahwareer suuqa; qaar ka mid ah warshadaha aqalada yaryar. Laftiisa qalabka xumu u adeegsanayaa waa sharci, in geeddi-socodka, aan waafaqsanayn shuruudahaa technology-soo-saarka cuntada, wax soo saarka ee aan buuxin shuruudaha wax soo saarka ugu dambeeya, waxay keentaa in ay suuqa sida marin habaabin ah oo dhan.
Sidaas wareegsan wax baakadaha cuntada caag dhibaatada ammaanka ayaa u maleeyay noqday dadka daryeelka ugu badan ee kulul, Shiinaha ay sabab u tahay warshadaha caag bilaabay dabayaaqadii, iyo horumarinta si deg deg ah, dalabka guryaha weyn, waxay keentay in qaar ka mid ah qarsoon oo ka gees ah si waqtigii laga helay, standard of caadiga ah in a waqtiga iyo wajiga suuqa u dhiganta, si yar oo qaar ka mid ah bidix warshad nooca workshop leeyahay badbaadada ah meel, halka sidoo kale in industry keentaa ayaa xun ee saamayn.